Dawladda Mareykanka Oo Soo Faragelisay Xiisadda U Dhaxaysa Soomaaliya Iyo Kenya, Lana Safatay Kenya – somalilandtoday.com
Dawladda Mareykanka Oo Soo Faragelisay Xiisadda U Dhaxaysa Soomaaliya Iyo Kenya, Lana Safatay Kenya
(SLT-Muqdisho)-Dawladda Mareykanka ayaa soo faragelisay xiisadda u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya, taasi oo uu Mareykanka doonayo in hoos loo xaliyo.
Mareykanka ayaa waxaa la sheegay inuu Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo cadaadis xooggan ku saarayo in si hoos loo dhigo xiisada u dhexeeysa labada dowladood.
Sidoo kale kulankii khadka Teleefoonka ahaa ee maalin ka hor dhex-maray Madaxweyne Farmaajo iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta uu yimid kadib markii Mareykanka uu soo farageliyay xiisada labad dhinac, waxaa sidaas qoray Wargeyska The Nation ee ka soo baxa Magaalada Nairobi.
Wargeyska The Nation waxaa kaloo uu qoray in Madaxweyne Farmaajo uu Uhuru ka Codsaday in xiisada labada dowladood si hoos loo xalinayo, In kastoo arrintaas Kenya ayna war rasmi ah kasoo saarin.
Kulankii dhex-maray Madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale ka dambeeyay, kadib markii dowladda Kenya ay eedeeyn u jeedisay dowladda Soomaaliya, taasi oo ay ku sheegtay in Soomaaliya ay kusoo xad-gudubtay dhulkeeda.
Qoraal ah oo lagu daabacay Bogga Madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in labada Madaxweyne ay ka wada hadleen ahmiyadda ay leedahay in si wadajir ah labada dal ay uga shaqeeyaan sugidda nabadgalyada xuduudaha iyo guud ahaan xasilloonida gobolka.
“Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweyne Kenyatta ayaa adkeeyay in amniga labada dal uu yahay mid isku xidhan, loona baahan yahay in laga fogaado wax walba oo keeni kara isfaham darro” ayaa lagu yidhi qoraalka kasoo baxay Madaxtooyadda dalka.